Micro-Dahab oo shaqo abuur u sameeyey qaar ka mid ah dhalinyarada Bosaso ( Sawiro) | shumis.net
Home » News » Micro-Dahab oo shaqo abuur u sameeyey qaar ka mid ah dhalinyarada Bosaso ( Sawiro)
Micro-Dahab oo shaqo abuur u sameeyey qaar ka mid ah dhalinyarada Bosaso ( Sawiro)
Ururka shaqo doon Puntland-Somalia iyo Micro Dahab ayaa shaqo abuur u sameeyey dhalinyaro isugu jirtay gabdho iyo wiilal, kadib markii dhalinyaradaasi ay ku guuleysteen tartanka fikradaha ganacsiga.
Xaflad ballaaran oo lagu soo bandhigayey dhalinyaradaasi ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee hotel Jubba, waxaana ka soo qeyb galay maamulka Dahabshiil Group, mas’uuliyiin ka socotay rugta ganacsiga, ganacsato, aqoonyahano, siyaasiyiin, arday, dhalinyaro, waalidiin iyo madaxda hay’adda Tadamun.
Shanta dhalinyarada ah ee fikradahooda ganacsi ku guuleystay ayaa kala ahaa:
Muuse Siciid Xasan
Maxamad Axmad Maxamuud
Cabdimahad Shire Cigaal
Maxamad Jaamac Yuusuf
Zamzam Cali Siciid
Cali Ceelaayo oo ah maamulaha guud ee Dahabshiil Group Puntland ayaa sheegay in Micro Dahab yahay qeyb ka mid ah Dahabshiil Group isla mar ahaantaana ka qeyb qaadanaysa shaqa abuurka bulshada.
Waxa uu sheegay in barnaamijkan yahay mid Islaami ah mana ahan mid dadka la siinayo lacag kaash ah, balse qofka la siinayo badeecad loo gaday si ganacsigiisa ugu horumariyo.
Cabdirixmaan Cabdirisaaq Ciise oo ka mid ah ururka Shaqodoon ayaa oo isna ka hadlay goobta ayaa sheegay in barnaamijkan ku tartameen boqolaal dhalinyaro ah, balse nasiib ay u yeesheen shanta qof ee loo maalgelinayo fikradahooda ganacsi.
Waxa uu intaasi ku daray Cabdraxmaan ujeedada laga ka leeyahay mashruucaan ay tahay in lagu yareeyo saboolnimada lana kobciyo dhaqaalaha dadka danyarta ah.
Guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo wershadaha Puntland Maxamad Caydiid Jaamac ayaa ku ammaanay shirkadda Dahabshiil Group iyo ururka shaqo doon doorka wanaagsan ay ka qeybqaateeen ,isagoona sheegay in barnaamijkan yahay mid waxtar u leh bulshada.
Title: Micro-Dahab oo shaqo abuur u sameeyey qaar ka mid ah dhalinyarada Bosaso ( Sawiro)